Usiza izikole ngezidingo zeSayensi
UFISA ukubona zonke izikole zasemakhaya nasemalokishini zinamathuluzi ezobuChwepheshe naweSayensi, uNksz Thobile Cele oyi-Account Manager kwaLasec, onxusa osomabhizinisi ukunikelela izikole ISITHOMBE:MOTSHWARI MOFOKENG/ANA
ZANELE MTHETHWA | March 19, 2020
UKUSHONELWA nguyise emncane nokuhamba ehlala ezihlotsheni, kwamenza wasebenza kanzima ukuzithuthukisa nokusiza ezinye izingane, owesifazane osebenza enkampanini esiza izikole.
UNksz Thobile Cele ( 37), uyi-Account Manager yakwaLasec, okuyinkampani eyakha amathuluzi eSayensi. Umsebenzi wakhe wukunxenxa izinkampani nosomabhizinisi ukuthi baxhase izikole ezisemalokishini nasezindaweni ezisemakhaya ukuze zibe namaScience Laboratory (Lab). Usesize izikole ezingaphezu kuka-100 KwaZulu-Natal kusukela aqala lo msebenzi.
“Ngazalelwa eMlaza ngagcina ngiqedela * -matric e-Athlone Girls High eGoli. Ngashonelwa ngubaba ngifunda uGrade 10, kwadingeka ngiyohlaliswa nobaba omdala eGoli. Ekhaya ngatshelwa ukuthi njengoba kungubaba kuphela obesebenza, kuzomele ngiyohlala nobaba omdala ukuze ngikwazi ukuqhubeka nesikole,” kuchaza yena.
Uthe kwakunzima ukuqala isikole esisha ngoJuni eGoli, esuka e-Reunion Secondary, eSiphingo.
Uphinde washayeka kushona unina esefunda uGrade 12, okwenza wafeyila nezivivinyo zangoSepthemba. Lokhu kwenza waphathwa wukhwantalala wangaya ngisho kwiMatric Dance. Yilapho azitshela khona ukuthi uzosebenza ngeke abe nengane engayihlelelanga njengoba ekhule eseyintandane.
Emuva kokuqeda isikole uNksz Cele wayofundela iHotel Management e-International Hotel School, eThekwini.
Yize ebegxile ekufundeleni umsebenzi weFront Desk wokusiza amakhasimende, uthe kuningi agcina ekufundile ngokuphathwa kwamahhotela. Eqala ukuvivinyelwa umsebenzi wafakwa ehhotela eliseThekwini.
“Kuthe uma kuvulwa ihhotela elisha eBallito, imenenja yakhona eyayingibone lapho ngangivivinyelwa khona umsebenzi, yangicela ukuthi ngizosebenza nayo. Ngifike ngaba yiReservations Manager, ngibhekene namagumbi angu-16 ehhotela. Bengibona umncane lo msebenzi sengifuna omkhulu ngoba ngiyayithanda inselelo ngadlulela eFairmot Hotel eZimbali,” kusho yena. Mayelana nomsebenzi wakwaLasec, uNksz Cele uthe waqashelwa ukuba yiSales Solution Specialist ngo-2013, wabuye wakhushulelwa ekubeni yi-Account Manager. Echaza ngesikhundla esisha, uthe unxenxa izinkampani ezinkulu nosomabhizinisi ukuthi bagxile ekuthuthukiseni umkhakha weBalo, iSayensi nezobuChwepheshe ngokunikelela izikole.
“Inkampani yethu ikhiqiza * -80% wamaScience Kit. Umsebenzi wami wukuqinisekisa ukuthi zonke izikole ezisemakhaya nasemalokishini zineScience Lab ephelele. Kuba nzima ukunxenxa osomabhizinisi ukufaka imali ngoba amathuluzi ayebiwa. Kumele ngibancenge ngiqinisekise nokuthi bazobe bengayilahli imali yabo ngokunikela. Angisagcini ngokubanxenxa kodwa isikole esizonikelelwa ngiyasivakashela ukuqinisekisa ukuthi amathuluzi aphephile futhi liyenyuka nezinga lokuphasa kulezi zifundo ezinikelelwayo,” kusho yena.
Ngenxa yokukhula engenabazali, uma eyonikela ezikoleni usekhuthaza nezingane ngokubaluleka kokufunda nokuziphatha, ikakhulukazi ezamantombazane.